Iwu nke Ọrụ Programụ Mgbakwụnye
Deeti Amalitere: October 21, 2019
Site n'ịnọgide na eji weebụsaịtị Paxful (ma ọ bụ dị ka Mgbakwunye ma ọ bụ na uzọ ọzọ), a ga ewere na ị kwenyere na ịnakwere Amụma Nzuzo, gụnyere dịka enwere ike ịgbanwe site n'oge ruo n'oge ọzọ aga eme mgbanwe. Usoro nke Nzuzo anyị ugbu a nwere ike ịnweta site na saịtị a ma ọ bụ site na ịpị njikọ a: https://paxful.com/privacy. Maka izere obi abụọ, biko mara na enwere ike ịkekọrịta ụfọdụ ozi akaụntụ gị na ndị mmekọ gị dịka akụkụ nke nsonye gị na Programụ Mgbakwụnye, gụnyere mana ọnweghị oke na nkọwapụta ebe yana ọrụ akaụntụ.
Ihe ndị a bụ Iwu na Ntụziaka metụtara Programụ Mgbakwụnye. Paxful nwere ikike (naanị na ezi uche ya na enweghị ọkwa) iji: (a) gbanwee Iwu ma ọ bụ Usoro niile a, n'oge ọ bụla na site n'oge ruo n'oge, gụnyere (mana ọnweghị oke) site na ịgbanwe pasent onyinye a ga akwụ akọwara n'okpuru ebe a, (b) kwụsịtụ ma ọ bụ kagbuo Programụ Mgbakwụnye, na/ma ọ bụ (c) kwụsịtụ ma ọ bụ na dịgide na Mgbakwụnye na akaụntụ Paxful ma ọ bụrụ na ị na ekere òkè ụfọdụ omume dị ka akọwara n'okpuru.
Dị ka onye Mgbakwunye, ị nwere ohere ịmebata ndị ọzọ na ebeahịa Bitcoin Paxful ma nweta ụgwọ ọrụ dabere na ahịa BTC ha mere n'elu platfọmu anyị. Paxful na akwụ ụgwọ ọrụ niile maka Mgbakwunye naanị na BTC.
A na ahazi Programụ Mgbakwụnye dị ka usoro programụ abụọ maka oge mbụ ndị ọrụ nke atọ:
Ọnọdụ 1 a Kpọtara
Otu Ogo 1 Akpotara bụ otu ọzọ na edebanye aha iji Ebeahịa Bitcoin Paxful na eji njikọ ndebanye aha pụrụ iche nke Paxful nyere gị mgbe ị debanyere aha na Programụ Mgbakwụnye.
Ọnọdụ 2 a Kpọtara
Otu Ogo 2 Akpọtara bụ otu ọzọ na edebanye aha iji Ebeahịa Bitcoin Paxful na eji njikọ ndebanye aha pụrụ iche nke Paxful ga enye na Ntuziaka Ogo 1 Akpotara nke gị.
Onyinye ha aga akwụ.
Ọ gwụla ma Paxful kwetara, ị ga enweta onyinye site na Paxful oge ọ bụla Ogo 1 Akpotara ma ọ bụ Ogo 2 nke gị Akpotara mezue azụmahịa BTC "Zụta" site na iji Paxful.
Dị ka ị maara, Paxful na agba Ụgwọ Ego edebere ruo na azụchaa ahịa n'ihe metụtara azụmahịa ọ bụla azụchara n'elu platfọmu ya. Ụgwọ Ego edebere ruo na azụchaa ahịa nwere ike ịgbanwe site na Paxful n’oge ọ bụla yana site n’oge ruo n’oge. Ị nwere ike ịchọta nkọwa nke Ụgwọ Ego edebere ruo na azụchaa ahịa na ego ya ugbu a site na ịpị njikọ a: https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees
Mgbe onye Akpọtara Ogo 1 rụzuru azụmaahịa BTC “Zụta” site na iji Paxful, Paxful ga akwụ ụgwọ na Akpa ego Mgbakwunye gị na nchikota (na BTC) nhata: 50% nke Ụgwọ Ego edebere ruo na azụchaa ahịa ahụ n arụ ọrụ.
Mgbe onye Akpọtara Ogo 2 rụzuru azụmaahịa BTC “Zụta” site na iji Paxful, Paxful ga akwụ ụgwọ na Akpa ego Mgbakwunye gị na nchikota (na BTC) nhata: 10% nke Ụgwọ Ego edebere ruo na azụchaa ahịa ahụ n arụ ọrụ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na onye Akpọtara Ogo 1 nke gị arụo ọrụ azụmahịa BTC "Zụta" na onye otu Akpọtara Ogo 1 ọzọ nke Programụ Mgbakwụnye, mgbe ahụ onye ọ bụla n'ime gị na onye otu ọzọ ga ekerịta onyinye 50%.
N'otu aka ahu, ọ bụrụ na onye Akpọtara Ogo 2 nke gị na arụ ọrụ azụmahịa BTC "Zụta" na onye otu Akpọtara Ogo 2 ọzọ nke Programụ Mgbakwụnye, mgbe ahụ onye ọ bụla n'ime gị na onye otu ọzọ ga ekerịta onyinye 10%.
Oge ọ bụla ị na azụ ma ọ bụ na erere otu Mgbakwunye Ogo 1 ma ọ bụ Mgbakwunye Ogo 2 ị gaghị enweta onyinye ọ bụla.
Onyinye ịnwetara na njikọ azụmahịa ọ bụla dị otú ahụ ga-abụ nke a ga akwụnye na Akpa ego Mgbakwunye gị ngwa ngwa na ụdị mmezu azụmahịa ahụ. Oge ọ bụla azụmahịa dị otú ahụ mechara nke ọma, Paxful ga ezitere gị imeelu nchoputaeziokwu. N'ụzọ dị otu a, ịnwere ike ilele ụfọ akpa ego Mgbakwunye gị toro n'ime dashbọọdụ gị Paxful.
N’ọnọdụ ụfọdụ, ị nwekwara ike tozuo oke inweta ego ntinye aka oge ọ bụla onye Akpọtara Ogo 1 ma ọ bụ onye Akpọtara Ogo 2 nke gị mezuru azụmahịa BTC “Ree” site na iji Paxful. Iji chọpụta ntozu gị ị nweta ụgwọ na azụmahịa onye Akpọtara Ogo 1 na onye Akpọtara Ogo 2 "Ree", biko kpọtụrụ Ndi Nkwado Paxful na [email protected]. Paxful nwere ikike ikpebi, naanị ya ma nwee uche zuru oke, ma enwere ike ịhapụ gị ma ọ bụ kwenye gị ị nweta ụgwọ ntinye aka ọ bụla maka azụmahịa "Ree".
Na Ewepu Onyinye Gị.
Mgbe obula ụfọ n’ime Akpa ego Mgbakwunye gi ruru $US 10 (na uru nke BTC), iga enwe ike inyefe ụfọ ego niile n’ime Akpa ego BTC Paxful gi. Ozugbo ụfọ Akpa ego Mgbakwunye gị ruru ngụkọta ndụ nke $300, a ga achọ ka gị nyefee nchoputaeziokwu njirimara nanchoputaeziokwu adreesị. Ozugbo imesiri nke a, inwere onwe gi ime ihe obula masiri gi n’ego nweta gị. N'inye anyị nke a ma ọ bụ ozi ọ bụla ọzọ a nwere ike ịchọ, ị kwadoro na ozi ahụ niile bụ eziokwu, zie ezi na adịghị eduhie.I kwenyere ozugbo inye anyị ozi ọhụrụ ma ọ bụrụ na ozi ọ bụla ị nyere gbanwere. Ị nyere anyị ikike ịjụ ajụjụ, ma ọ bụ ozugbo ma ọ bụ site na ndị ọzọ, na anyị chere na ọ dị mkpa iji nyochaa njirimara gị ma ọ bụ chebe gị na / ma ọ bụ anyị megide mpụ ma ọ bụ mpụ ego ọzọ, yana ịme ihe anyị chere dị mkpa dabere na nsonaazụ ajụjụ ndị dị otú a . Mgbe anyị mere nyocha ndị a, ị kwenyere ma kwenye na enwere ike igosipụta ozi nkeonwe gị maka ntụnyere akwụmụgwọ na ụlọ ọrụ mgbochi aghụghọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ mpụ na ụlọ ọrụ ndị a nwere ike ịzaghachi ajụjụ anyị zuru ezu.
Ndụmọdụ Ọkachamara: Anyị na atụ aro i rèè nweta BTC gị n’elu platfọmu anyị maka uru mgbakwunye.
Ihe ndị a bụ onye nnọchi anya (mana ọ bụghị ọgwụgwụ) ndepụta ụdị omume na omume ndị nwere ike ime ka Paxful (dị ka Paxful si kpebisie ike na ikpe ya zuru oke) iji (a) kagbuo ma ọ bụ weghachite ịkwụ ụgwọ nke ego gị mgbe ahụ (ma eweghachi ma ọ bụ not) isslọrụ, na / ma ọ bụ (b) kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ (s) Mgbakwunye na akaụntụ Paxful gị kpamkpam.
Iji spam na adọta ndị ọzọ na platfọmu Paxful.
Itinye aka na iwu megidere iwu ọ bụla, ma ọ bụ metụtara na iji platfọmu Paxful na ọrụ ya.
Na emepụta akaụntụ ndị ọzọ n platfọmu Paxful nke na-erite uru na Programụ Mgbakwụnye Paxful n'ụdị ọ bụla. A na ahapụ gị ka ị nwee otu akaụntụ ma ekweghị gị ree, gbaziri, kesaa ma ọ bụ na-m enweghị ike ịme akaụntụ gị ma ọ bụ nkọwa ọ bụla dị mkpa iji nweta akaụntụ gị nye ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na abụghị onwe gị. Ị mepụta ozi ụgha maka akaụntụ gị, ịgha ụgha obodo gị ma ọ bụ ịnye akwụkwọ njirimara wayo amachibidoro.
Mmebi ọ bụla ma ọ bụ mmebi iwu nke gị ma ọ bụ ndị nnọchi anya gị nke ọrụ gị ọ bụla n'okpuru Usoro na Iwu a.
Iji - n'ụdị mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ mgbasa ozi ọzọ ma ọ bụ ozi nke ụdị ọ bụla nke ị malitere ma ọ bụ kesaa ma ọ bụ na-ejikwa ya - okwu "pax" ma ọ bụ "paxful" ma ọ bụ ụdị ọ bụla ọzọ-otu, ụda-myiri, ma ọ bụ okwu ndị ọzọ, akara, ma ọ bụ aha ndị Paxful chere na ọ ga-abụ ihe mgbagwoju anya na ụghalaahịa PAXFUL.
Iledakwa, ikwutọ, or mmebi aha(a) Paxful ma ọ bụ onye ọ bụla na ndị nduzi ya, ndị isi ọrụ, ndị ọrụ ya, ndị ọrụ ngo, ndị ọrụ, ma ọ bụ ndị nnọchi anya, ma ọ bụ (b) ndị ọrụ platfọmu Paxful, gụnyere ndị ọzọ so na Programụ Mgbakwụnye.
Itinye aka n’ihe ọ bụla Paxful kwenyere (n’onwe ya na ikpe zuru oke) nwere ike ịdabere na iwu, usoro iwu, ma ọ bụ nyocha ikpe na-enyocha iwu, iwu, ma ọ bụ ụkpụrụ nke mba ọ bụla, otu mba dị iche iche (gụnyere European Union), ma ọ bụ ikike ndị ọzọ. ma ọ bụ ndị ọchịchị gụnyere, ma ọ bụghị nanị ịgba chaa chaa iwu na akwadoghị, wayo, mpụ ego, ma ọ bụ ọrụ ndị na eyi ọha egwu.
Nye ihe ọmụma na abụghị eziokwu, nke na ezighi ezi, ma ọ bụ nke nduhie.
Nye njirimara ụgha, na ezighi ezi, ma ọ bụ na eduhie eduhie na nchoputaeziokwu adreesị.
Gbaa maọbụ mee ka ndị ọzọ sonye na ọrụ ọbụla a machibidoro n'okpuru Nkebi nke a.
Ikike Ihe onwunwe Ogụgụ isi
Ọ gwụla ma anyị gosipụtara n'ụzọ ọzọ, ikike ọgụgụ isi niile na Weebụsaịtị yana ọdịnaya ọ bụla enyere na njikọ nke ọrụ anyị, bụ akụ nke Paxful ma ọ bụ ndị nyere anyị ikikere ma ọ bụ ndị na-eweta anyị ma chekwaa ya site na iwu akụ ọgụgụ isi. Anyị anaghị enye ikike ikikere maka ojiji nke ọdịnaya nke weebụsaịtị. Ị gaghị ere ma ọ bụ gbanwee ihe Weebụsaịtị ma ọ bụ mepụta, gosipụta, rụọ n'ihu ọha, kesaa ma ọ bụ jiri ihe ndị ahụ n'ụzọ ọ bụla maka nzube ọ bụla ma ọ bụ nke azụmahịa. A machibidoro iji ihe ndị ahụ na weebụsaịtị ọ bụla ma ọ bụ na ịkekọrịta faịlụ ma ọ bụ ọrụ yiri ya maka nzube ọ bụla.
Ị nwere ike idetuo ihe ọ bụla ma ọ bụ ọdịnaya dị na weebụsaịtị ma ọ bụ nweta ya site na weebụsaịtị ahụ n'enweghị ikike ederede anyị. Ikike niile ekwupụtaghị n'ime ebe a iji ihe ndị dị na weebụsaịtị wepụtara na Paxful zuru ezu.
Mmachi nke Ibu / Nkwuputa
A na-enye saịtị a na Programụ Mgbakwunye na ndabere "dị ka ọ dị" na "dị ka ọ dị" maka ozi gị ma jiri na enweghị ihe nnọchite ma ọ bụ nkwado ọ bụla. Ruo oke kachasị nke iwu dị na ya kwere, anyị anaghị ebi ụdị ọ bụla, ma ọ bụ gosipụta ma ọ bụ na-egosi, n'ihe metụtara saịtị ma ọ bụ Programụ Mgbakwunye, gụnyere mana na ọnweghị oke, akwụkwọ ikike nke afọ ojuju, arụmọrụ, ahụike maka otu nzube, na abụghị ịda iwu, ndakọrịta, nche, ziri ezi, ọnọdụ zuru ezu, ma ọ bụ ihe ọ bụla na egosi akwụkwọ ikike ịda si N'ezie nke omume ma ọ bụ ojiji ma ọ bụ azụmaahịa.
Ọ bụrụ na oruru oke iwu dị nabatara, anyị agaghị aza iwu maka:
1. ọghọm akụ na ụba ọ bụla (gụnyere na enweghị oke mmachi nke ego, uru, nkwekọrịta, azụmahịa ma ọ bụ ego echekwara);
2. ọghọm ma ọ bụ aha ọma ọghọm ọ bụla;
3. ọghọm ọ bụla pụrụiche ma ọ bụ nke na abaghị uru, na agbanyeghị na ariwanye.
Enweghi Mmasị na Njide na Adịghị Emerụ Ahu
Ị kwenyere ijide Paxful na enweghị nsogbu, Inc. (na onye ọ bụla n'ime ndị isi anyị, ndị isi, ndị otu, ndị ọrụ, ndị nnọchi anya na ndị mmekọ) na nkwupụta ọ bụla, ọchịchọ, ihe, mmebi, ọnwụ, ụgwọ ma ọ bụ mmefu ọ bụla, gụnyere na enweghị mmachi ụgwọ iwu dabara adaba, na ebilite ma ọ bụ metụtara: ojiji nke, ma ọ bụ omume gị na Programụ Mgbakwunye anyị; ma ọ bụ mmebi nke Usoro Iwu ndị a. Na mgbakwunye, ị kwenyere na ị ga ahụ maka (ma kwụo anyị ụgwọ kpamkpam) ebubo niile, ụgwọ, mmebi, na mmefu, gụnyere ụgwọ iwu, nke anyị tara ahụhụ ya ma na-esite ma ọ bụ metụtara mmebi Usoro Iwu ọ bụla sitere n'aka gị ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla ọzọ sitere na anyị dabere na ojiji nke ọrụ na Programụ Mgbakwụnye ma ọ bụ jiri onye ọ bụla ọzọ nweta ọrụ site na iji akaụntụ njirimara gị, ngwaọrụ ma ọ bụ akaụntụ nnweta ịntanetị; ma ọ bụ mmebi iwu ọ bụla ma ọ bụ ikike nke ndị ọzọ.
Usoro na Iwy ndị a na ojiji nke weebụsaịtị na Gbakwụnye Programụ ga achịkwa ma kọwaa ya dịka Iwu United States. Nghọtahie ọ bụla na esite na Usoro na Ọnọdụ ndị a ma ọ bụ ojiji nke weebụsaịtị ma ọ bụ Gbakwụnye Programụ ga edozi naanị n'ụlọ ikpe nke United States.Onweghị ihe dị na Usoro na Ọnọdụ ndị a ga-eche na ọ ga-emetụta ikike iwu gị n'okpuru iwu United States. Ọ bụrụ na akụkụ ọ bụla nke Usoro na Ọnọdụ ndị a na ejide site na ụlọ ikpe ọ bụla nke United States ka ọ bụrụ ihe na abaghị uru ma ọ bụ nke a na apụghị imezu na dum ma ọ bụ n'akụkụ ụfọdụ, a gaghị emetụta ndaba ma ọ bụ ịmanye ya nke ngalaba ndị ọzọ nke usoro na ọnọdụ a. Isi okwu ọ bụla dị na Usoro na Ọnọdụ ndị a bụ maka ebumnuche ihe ọmụma naanị na ọ bụghị iwu akwadoro nke Usoro na Ọnọdụ ndị a.